သတင်းပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 92
Ko Zarganar – ကိုဇာဂနာနဲ့ ကနေဒါမြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံကြမည်
ကိုဇာဂနာနဲ့ ကနေဒါမြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံကြမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ လာမည့် မတ်လ ၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေ၊ ညနေပိုင်း၊ ယူနီဗာစီတီအော့်ဖ်တိုရန်တို၊ ခန်းမဆောင်မှာ … ဟောပြောပွဲနဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျင်းပမည် No tags for this post.
Than Shwe ordered to destroy NLD
NLD ပါတီအား အမြစ်ပြတ် ခြေမှုန်းပစ်ရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက အမိန့်ပေးခဲ့ မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၂ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အမိန့်အရ NLD ပါတီဝင်များကို အပြစ်ရှာ နှိမ်နင်းခဲ့သည်ဟု မြန်မာစစ်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွင် အရာရှိတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသူ ဦးအောင်လင်းထွဋ်က VOA သတင်းဌာနကို မကြာသေးမီက ပြောလိုက်သည်။ Tags: ကချင်
ဒေါ်နေရီဗဆွေလည်း NLD ပါတီဝင်ပြီ
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၇ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း၊ ဒေါ်နေရီဗဆွေနှင့် ဒေါ်သန်းသန်းနု (Photograph: Jack Davies for the Guardian) NLD က ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)၏ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်နေရီဗဆွေအား ပါတီဝင်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ No tags for this post.
Hlaing Tharyar Strike – ၀ါဏိဇ္ဖခုံရုံးတက်ရန် အယူအဆ ကွဲလွဲမှုများရှိနေ
လှိုင်သာယာဆန္ဒပြမှု ၀ါဏိဇ္ဖခုံရုံးတက်ရန် အယူအဆ ကွဲလွဲမှုများရှိနေ by Yangon Press International ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ (YPI) ညှိနှိုင်းပြေလည်မှု မရရှိသေးပဲ ၁၅ ရက်ရှည်ကြာလာသည့် လှိုင်သာယာ တိုင်ရီ ရှုးဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှုကို လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ၀ါဏိဇ္ဖ ပဋိပက္ခ ခုံရှုံးသို့ တင်၍ အဆုံးအဖြတ်ခံယူမည့် အချက်အပေါ်တွင် အလုပ်သမားများ သဘောထား အမြင်ကွဲလွဲမှုရှိနေကြသည်ဟု အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ ခုံရုံးတင်ရန် အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူနှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူခဲ့ကြသော်လည်း အလုပ်သမား အများစုက တောင်းဆိုချက်မရပဲ ဆန္ဒပြခြင်းကို မရပ်ဆိုင်းလိုကြကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ၁၅ ရက်မြောက် ဆန္ဒပြနေသည့် လှိုင်သာယာ တိုင်ရီ ရှုးဖိနပ်စက်ရုံရှေ့မှ...
ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘဲ လွှတ်တော်တွင် NLD တနေရာ ရရှိ
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ဓာတ်ပုံ – 7Day ဂျာနယ် လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံး ဖြစ်သော NLD သည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်မီမှာပင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦး ရရှိသွားသည်။ No tags for this post.
ဟန့်တားမှုများရှိနေကြောင်း NLD ပြောဆို
မေသင်္ကြန်ဟိန်(ရွှေမြစ်မခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ NLD ၏ ယနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရသည့် ဦးဥာဏ်ဝင်း (ဓာတ်ပုံ – getty images) tအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးဆင်းမဲ့ နယ်မြေတွေကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အချို့က ကန့်သတ်ခြင်း၊ Tags: ကချင်
ABSDF in 1992
ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ RFA ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၂ Tags: ကချင်
ဆောင်းဦးလှိုင် တကိုယ်တော်ပွဲမှာ အနှောက်အယှက်များနဲ့ကြုံရ – Saung Oo Hlaing’s concert
Shwe Thanzin ဖေ့စ်ဘုတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ဆောင်းဦးလှိုင် နဲ့ ရွှေသံစဉ်ကိုဝင်းမော် (ဓာတ်ပုံများ – Burma VJ Media Network) မနေ့က(၁၇-၂-၂၀၁၂)ည ၇း၃၀ မှ ၁၁း၀၀ အထိ တေးသံရှင်ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ နှလုံးသားတွေ လှူမယ့်ည ဆိုတဲ့ ONE MAN SHOW ကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မကျောင်း လမ်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ No tags for this post.
Burmese Student Club (CCSF) – ပြည်ထောင်စုနေ့နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကျင်းပ
Burmese Student Club (City College of San Francisco) က ပြည်ထောင်စုနေ့နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ ကျင်းပ နန္ဒာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ရက် နေ့က အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဆန်ဖရန်ဆစ္စကိုမြို့တွင် ပြည်ထောင်စုနေ့ နှင့် ၉၇နှစ်မြောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အဆုိုပါအခမ်းအနားတွင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအကဖျော်ဖြေမှုများ၊ စာတမ်းနှင့် ကဗျာရွတ်ဖတ်မှုများအပြင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမှန်တကယ်ညီညွှတ်မှု ဖော်ဆောင်ရေးကို ဦးတည်၍ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းသိမှတ်ဖွယ်ရာများကို တင်ပြပြောဆို ဆွေးနွေးကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဧည့်သည်တော်များနှင့် ကျောင်းသားများအပါဝင် ၃၀ ခန့် တက်ရောက်သည့်အပြင် BSC...
YPI – လှိုင်သာယာဆန္ဒပြအလုပ်သမားများအား အဆောင်မှနှင်ချမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
by Yangon Press International on Friday, 17 February 2012 at 02:22 · ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ (YPI) ယခုလ ၆ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး မိမိတို့ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ရပိုင်ခွင့်အတွက် စက်ရုံပိုင်ရှင်များအား ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြသည့် လှိုင်သာယာမြို့နယ် တိုင်ရီ ဖိနပ်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများအား လာမည့်စနေနေ့အထိ ဆန္ဒပြခြင်းမရပ်ပါက၎င်းတို့နေထိုင်ရာ စက်ရုံပိုင်အဆောင်မှ နှင်ထုတ်မည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများကဆိုသည်။ ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ မခိုင်ခိုင်နွယ်က “ အရင်ကတည်းက အဲဒီလိုပြောသံတွေကြားနေရတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူပြောမှန်းမသိဘူး။ စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေက တိုက်ရိုက်ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသတင်းကတော့ ထွက်နေတယ်” ဟု ပြေကြားသည်။ တိုင်ရီဖိနပ်စက်ရုံ၏ အလုပ်သမားများ နေထိုင်ရာအဆောင်တွင် အမျိုးသမီး အလုပ်သမား...
Page 92 of 94«1...9091929394»
ကာတွန်း Jison - သမ္မတကြီးကောက်ထားတဲ့ စာရင်း
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ ...
ဦးဝင်းတင် (၁၉၃၀-၂၀၁၄) - ၂၀၁၂ က အပြောင်းအလဲ … ဘယ်သူ့အတွက်လဲ
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၂၇)
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ - ၁၉၈ဝ) - အပိုင်း (၆၂)
U Aye Tha Aung's words
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေ အစီရင်ခံစာထွက်ရှိ
Law Eh Soe - လောအယ်စိုးဓာတ်ပုံပြပွဲ CEPA အနုပညာပြခန်းမှာ ကျင်းပမည်
(ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now) - Reuters သတင်းထောက် ၂ ဦးကို ပြန်လွှတ်ရန် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့များ တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိုင်းခရီးစဉ် "အပေးအယူ၊ အတိုးအလျှော့" လုပ်ခဲ့ရ - plans in Daw Suu's trip
Burmese new year in Singapore
iPhone, iPad ၀ယ်ရန် တရုတ်ဆယ်ကျော်သက် ကျောက်ကပ် ထုတ်ရောင်းမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
မိုးမခ ဖေဖော်ဝါရီကို အိမ်အရောက် မှာယူနိုင်ပါပြီ
Strike - မိုးထိမိုးမိဒေသ ရွှေလုပ်သားများ၏အောင်မြင်မှု ကွန်ယက်များမှ ကြေငြာချက်ထုတ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာကို ပြိုင်ဘက်တဦး ကန့်ကွက် - U Tin Yee's statement on Daw Suu
Join 93,065 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month March 2018 (119) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
မိုက်ခဲစိန် – အေးငြိမ်း၏ ‘စိတ်ပျက်စရာ မြန်မာစာရေးပုံ၊ ဘာသာပြန်ပုံနှင့် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ပုံများ’ ပို့စ် ပျောက်ဆုံးမ… https://t.co/zYRTZqvVwx about6minutes ago ReplyRetweetFavorite
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ စာအုပ် ထွက်ပြီ https://t.co/rLdxpJ0LYO https://t.co/V820hLKK8H about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ဂျူနီယာဝင်းရဲ့ မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ စာအုပ် ထွက်ပြီ https://t.co/I52zl3nMcP https://t.co/D79aYqSQzy about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ညီလင်းနိုင် – “စိတ်ခတ်ကျောက် ၁၈” https://t.co/O70A8W5Eu5 https://t.co/CSD7Jh1OoM about2hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မိုးသူ – မြန်မာ့အသံနှင့် ဘကြီးမိုး https://t.co/Ar89e1BO8G https://t.co/iVIPrNQtuM about4hours ago ReplyRetweetFavorite
MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ (28)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (143)
Maung Kyay Yay (7)
ကာတွန်း ATH (203)
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) (50)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (215)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (1,000)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (391)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (194)
Cartoon Box (3,352)
ဇာနီကြီး on စိန်ဝင်း ● အင်ဖော်မေးရှင်းစစ်ပွဲ
Dr. Maung Maung Gyi on မောင်လူရေး ● အမျိုးသမီး မဝင်ရ
Dr. Maung Maung Gyi on အောင်မျိုးဦး ● မတူကွဲပြားသော ရခိုင့်နောင်ရေး သုံးသပ်ချက်
မောင်စိန်သော် ● မဆုတ်တမ်း ခံစစ်စခန်း တိုက်ခဲ့စဉ်က – အပိုင်း (၂) | MoeMaKa Burmese News & Media on မောင်စိန်သော် ● မဆုတ်တမ်း ခံစစ်စခန်း တိုက်ခဲ့စဉ်က – အပိုင်း (၁)
Tommy Sin on ၀င်းအောင်ကြီး(မောင်အောင်မွန်) – ဦးတင်ထွဋ်ကသေ လူသတ်သမားက ပေါ်ပေါ်ထင်နေသွားတဲ့ တိုင်းပြည်